सर्पको रगत जुससरी
सर्पले काटेपछि पानीसम्म खान भ्याइँदैन भनिन्छ तर इण्डोनेसियामा जताततै त्यही सर्पको रगत जुससरह पिउने चलन छ । हुँदाहुँदा अहिले आएर सर्पको रगत पिउने पसल खुल्न थालेको छ । राजधानी जकार्तामा यस्तै पसल साँझको ५ बजेदेखि राति १ बजेसम्म खुल्छ र एकदिनमै हजारौं डलर आम्दानी गर्छ । स्थानीय र विदेशी साँझ घुम्न निस्कन्छन् र गोमन सर्पको रगत पिएर घर फर्कन्छन् । पुरुषले स्वस्थ बन्न र महिलाले… विस्तृत समाचार
स्कुलमै चुरोटको सर्को
प्रायः छात्रछात्रा पढ्न मन नलागेपछि पानी खाने वा पिसाब फेर्ने बहाना बनाएर कक्षाबाट बाहिरिने गर्छन् । यसो गर्दा ‘फ्रेस’ महसुस गर्छन् । तर, ब्रिटेनको क्याम्ब्रिजशायरको पिरबोर्खस्थित हनिहिल स्कुलले एउटा नयाँ नियम बनाएको छ, दिनमा दुईपटक चुरोट सल्काउन पाउने । १०/१० मिनेटको ब्रेकमा विद्यार्थीले खुलेआम चुरोट तान्न सक्छन् । प्रधानाध्यापिका नयाँ नियमले विद्यार्थीको ‘मुड’ तन्दुरुस्त बनाउने दाबी गर्छिन् । यद्यपि अन्य स्कुलले विरोधको आवाज उठाउन शुरु… विस्तृत समाचार
भित्री लुगा बेच्नेको भरमार
दक्षिण अमेरिकी देश पनामामा सोफियाको डट कम नाउँको अनलाइन पसल दर्ता भएको छ । महिलाले लगाउने अण्डरवेयर (पेन्टी) मात्र पाइने यो पसलका ग्राहक भने महिला नभई पुरुष हुने गरेका छन् । कारण त्यहाँ प्रयोगमा ल्याइसकेका पेन्टी मात्र बिक्री हुन्छ । हालैमात्र लगाइसकेको पुरानो एउटा पेन्टी पाँच हजार डलरमा बिक्री भएको समाचार प्रसारण भएपछि बेच्ने युवतीहरुको भीड लाग्न थालेको छ । २१ वर्षीया एक युवती भन्छिन्,… विस्तृत समाचार
​सम्पत्ति मानिने स्तन
१ श्रावण २०७४
अरुले भन्दा डेनिस महिला आफ्नो स्तनलाई सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति मान्छन् । वेभसाइट भिक्टोरिया मिलानले अनलाइनमार्फत १० लाख महिलामाझ सर्वेक्षण गर्दा सो नतिजा निस्केको हो । डेनिस २८.१ प्रतिशतले स्तनलाई महŒवपूर्ण स्त्री अंग मान्ने गरेको सर्वेक्षणले प्रष्ट्याएको छ । दोस्रोमा स्विडिस, तेस्रोमा ब्रिटिश र चौथोमा ग्रिक महिला परेका छन् । २५.३ प्रतिशत ग्रिकले स्तनलाई महŒव दिएका छन् । तथ्यांकमा अमेरिका १५ औं, क्यानाडा १८ औं र… विस्तृत समाचार
​साङ्ले किराको संसार
एउटै घटनामा १० लाख साङ्ले किरा जियाङ्सु प्रान्तमा फैलिएको समाचार भाइरल बनेपछि चिनियाँहरु हैरान बनेका छन् । लस एञ्जलस टाइम्सकी पत्रकार बारबरा डेमिकले ती साङ्ले किराका मालिक वाङ फुमिङ हुन् भनी पत्ता लगाइन् । यथार्थमा वाङले साङ्ला पालेका रहेछन्, त्यो पनि एउटा होइन ६ वटा फार्म निर्माण गरेर । उनीसित कूल १ करोड साङ्ला रहेछन्, तीमध्ये १० लाख फार्म छाडी भागेका रहेछन् । वाङले शुरुमा… विस्तृत समाचार
शरीर पोको पार्दै सञ्चो
जापानीहरुमा बहुलठ्ठीपन हावी हुँदै गएको छ । टोकियोका एकजना कलाकार हारुहिको कावागुचीले कपडामा आफ्नो शरीर पोको पारेको फोटो के सार्वजनिक गरेका थिए । सबैले त्यसै गर्न थाले । अब हुँदाहुँदा शरीर पोको पार्ने एउटा चिकित्सा पद्धति नै बन्यो । मांसपेशी र ढाडको दुखाइबाट मुक्ति पाउने र नितम्बको भाँचिएको हड्डी जोड्ने काममा यो पद्धति काम लाग्ने प्रचार गरिएको छ । युवाले तनावबाट मुक्ति पाउन पनि यस्तो… विस्तृत समाचार
​एउटा टोकाइको मूल्य
झिंगाजस्तो कालो रंगको सानो किराले टोकेपछि क्यानाडेली डेब्रोह स्यारेटले दुइटै स्तन गुमाएकी छन् । ओक्टारियो निवासी उनी स्तनमा किराले टोक्नेबित्तिकै स्थानीय जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा जँचाउन गइन् । चिकित्सकले २४ घण्टाभित्र दुवै स्तन काटेर नफाले ज्यान जाने बताएपछि श्रीमान–श्रीमती स्यारेट डराए । तत्कालै म्यास्टेकटमी (स्तन निकाल्ने शल्यक्रिया) गरी डेब्रोहको ज्यान बचाइयो । चिकित्सकले किराले मासु खाने जीवाणु शरीरमा सारेको बताएका छन् । विस्तृत समाचार
​खोजेर जानु, रोजेर लिनु
२५ अषाढ २०७४
घर बनाउने ! त्यो पनि शहरमा, कम खर्चले बन्छ ? तर इटलीको सिसली जानुस्, जुन मन पर्छ छान्नुस्, निःशुल्क । हो पालेर्मो प्रान्तको गंगी नगरमा यस्तै छ । यहाँका बासिन्दा धमाधम अमेरिका भासिएपछि ३ हजार २ सय पुरुष र ३ हजार ५ सय महिला गरी जम्माजम्मी ६ हजार ७ सय बाँकी छन्, जबकि घरको संख्या नै ५ हजार २ सय ७४ छ । अर्थात् १… विस्तृत समाचार
अमेरिकी मोडल तथा टेलिभिजन कार्यक्रमकी प्रस्तोता २१ वर्षीया केन्डल जेनरले स्तन सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउनु हुन्न भन्ने कुरो प्रमाणित गरी देखाएकी छन् । इन्स्टाग्राममा गत नोभेम्बरमा मात्र ब्रा नलाएको फोटो सार्वजनिक गरेकी उनले हालै स्तनको मुन्टोमा खाने पिजाको टुक्राले छोपेको फोटो सार्वजनिक गरेकी छन्, जुन फोटोले २० लाख ‘लाइक’ पाइसकेको छ । सो सामाजिक सञ्जालमा उनका ७ करोड ३५ लाख ‘फलोअर’ छन् । विस्तृत समाचार
​हैरान पार्ने हिसाब
दोस्रो विश्वयुद्धताका र युद्ध शुरु हुनुअघि जापानले एशियामा आतंक फैलाएको इतिहास छ । सन् १९३७ मा चीनसित युद्ध भयो । चीनको नामोनिशान मेट्ने अभिप्रायले अघि सरेको उसले त्यहाँ बूढाबूढी–केटाकेटी कोही भनेन । ६ हप्ताको दौरान नानकिङमा तीन लाखको आमसंहार ग¥यो । एक हजारलाई योङमउ शहरबाहिरको पहेंलो नदीमा डुबाएर मा¥यो । ८० हजार महिला जापानी सेनाबाट बलात्कृत भए । चीनको दाबी छ, सन् १९४५ सम्ममा जापानले… विस्तृत समाचार